हैट गर्नेलाइ भन्दा देख्नेलाइ लाज, क्रिश्मसमै पुनम पाण्डेकाे यस्तो बात! – भिडियो सहित – PathivaraOnline
Home > भिडियो > हैट गर्नेलाइ भन्दा देख्नेलाइ लाज, क्रिश्मसमै पुनम पाण्डेकाे यस्तो बात! – भिडियो सहित
हैट गर्नेलाइ भन्दा देख्नेलाइ लाज, क्रिश्मसमै पुनम पाण्डेकाे यस्तो बात! – भिडियो सहित
admin December 25, 2018 भिडियो, मनोरञ्जन 0
एजेन्सी– बलिउड नायिका पुनम पाण्डे प्राय अश्लिल हर्कतको कारण चर्चा र विवादमा हुने गर्छिन्। चलचित्र पाउनु भन्दा अगाडी देखिनै सामाजिक संजालमा बोल्ड हर्कत गर्दै आएकी पुनम पाण्डेले आफ्नो हतियारनै सामाजिक संजाललाई बनाउने गरेकी छिन्। चलचित्रमा मात्र नभई विभिन्न अवसरमा उनी नांगिने पनि गर्छिन्। सामाजिक संजालमा अत्याधिक बोल्ड तस्विर अपलोड गरेर बोल्ड र छाडा नायिकाको छबि बनाएकी पूनमको हर्कतमा कहिले पनि परिवर्तन भने आएको छैन।
आफ्नो फ्यानहरुलाई क्रिसमस गिफ्ट भन्दै पुनम पाण्डेले बोल्ड भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर गरेकी छिन्। उनले शेयर गरेको त्यस भिडियोमा उनी सान्टाक्लज पहिरनमा देखा परेकी छिन्। फ्यानहरूको लागि गिफ्टको रुपमा अपलोड गरिएको त्यस भिडियोमा उनलाई बोल्ड हर्कत गर्दै गरेको देख्न सकिन्छ। ‘सान्टा बेबी’ बोलको गीतमा झुम्दै गरेकी पुनम बोल्डनेस देखाउन कुनै कसर छोडेकी छैनन्।
यस भन्दा अगाडी पनि उनी यस्तै हर्कत गर्दै आएकी छिन्। उनले अपलोड गरेका भिडियोको कारण उनी यस भन्दा अगाडी पनि विवादमा परेको हुँदा यस पटक पनि उनी विवादमा पर्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ।
नेपाल आउँदा पनि उनी विवादितनै रहिन्। विश्वकपको समयमा नेपाल आएकी उनलाई समयमानै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको कारण उनले छाडा हर्कत भने गर्न पाइनन्।
विश्वकपको फाइनलका दिन डेजाभूमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी हुन पूनम नेपाल आएकी थिइन्। उनै पूनमले फेरी एकपटक इन्स्टाग्राममा एक भिडियो अपलोड गरेकी छिन्।
क्रिसमस इभकै दिन आयो क्रिश्चियनहरूकै लागि यस्तो दुःखद खबर
०७५ पौष ११ गते बुधबार ई. सं. २०१८ डिसेम्बर २६ तारिख, हेर्नुहोस राशी अनुसार तपाईंको भाग्य
मेरो आँसु चुकाउन सक्छौँ’ भन्दै भिटेनले दरबारमार्गमा पैसा फालेर गरे बबाल (भिडियो सहित)
एक्कासी बिरामी परेकि पूर्णकला बिसी अस्पतालबाट फर्किएपछि भनिन: ढिला गएको भए नबच्ने रैछु (भिडियो)